1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode
1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာရောင်ခြည်ကို discrete-mode (DM) နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောညှိနိူင်စွမ်းရှိသည့်လေဆာဒိုင် Diode ကိုပေးနိုင်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော SMSR နှင့်အလွန်လိုင်းအကျယ်လိုင်းကျဉ်းကျဉ်းစေနိုင်သည်။ 1650nm ရန်။
1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode ၏အနှစ်ချုပ်
1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode ၏နိဒါန်း
1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာရောင်ခြည်ကို discrete-mode (DM) နည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောညှိနိူင်စွမ်းရှိသည့်လေဆာဒိုင် Diode ကိုပေးစွမ်းသည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော SMSR၊ အလွန်ကောင်းမွန်သော SMSR နှင့်ကျဉ်းသောလိုင်းအကျယ်တို့ကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ 1650nm မှ 1270nm ။
၃။ အင်္ဂါရပ်များ 1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode
လှိုင်းအလျား 1290nm (သို့) စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
CW သို့မဟုတ် Pulse စစ်ဆင်ရေး။
4. 1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1288 1290 1292 nm
6. Package ပုံဆွဲခြင်းနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပာယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) 1290nm DFB 10mW Butterfly လေဆာ Diode ၏သတ်မှတ်ချက်
7. 1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာ Diode ကိုပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1290nm DFB 10mW လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် Diode, ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်းသူများ, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, စက်ရုံ, စိတ်ကြိုက်, အမြောက်အများ, တရုတ်, တရုတ်နိုင်ငံ၌ထုတ်လုပ်သည်စျေးပေါ, အနိမ့်စျေးနှုန်း, အရည်အသွေး